Ny tantaran'i Marcos Rojo momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Home AMERIKANINA STARS Ny tantaran'i Marcos Rojo momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Janoary 30, 2018
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Genius mpiaro tsara indrindra fantatra amin'ny anarana; "Becho". Ny tantaranay momba ny tantaram-pitiavan'i Marcos Rojo miaraka amin'ny tantara tsy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny fomban-dRamatoa Marcos Rojo
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony, saingy vitsy no nijery ny bio's Marcos Rojo izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, andao isika hanomboka.
Marcos Rojo Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Hafatra Tantara -Voalohandohan'ny fiainana
[Nomera feno] Faustino Marcos Alberto Rojo dia teraka tamin'ny 20th of March 1990 tao La Plata, Arzantina. Teraka tamin'i Carlina Rojo reniny izy ary Marcos Rojo Snr rainy. Nihalehibe tao El Triunfo tao La Plata izy, tanàna malemy 40 avy ao Buenos Aires (Renivohitr'i Arzantina). Tanàna iray fantatra amin'ny andian-jiolahim-boto malaza sy ireo mpilalao baolina kitra.
Amin'ny fombany hanosehana ny asany amin'ny zana-tohatra tsy misy herisetra ao La Plata, nentin'ny ray aman-drenin'i Marcos tany amin'ny Estudiantes LP izy, ka nahatonga azy ho voasoratra ho tanora mpilalao baolina tamin'ny taona 4. Ity ambany ity dia sary mahagagam-peo mahavariana an'ilay mpikomy izay nanao ny dingana voalohany ao amin'ny lalao mahafinaritra amin'ny maha-zaza azy.
Araka ny voalazan'i Marcos Rojo, ... "Rehefa nanomboka nilalao baolina aho dia tsy nanana fiara ny dadako. Tena nahantra izy ary tsy dia tena akaiky loatra ny fampiofanana nataonay. Tsy maintsy nandeha bisikileta àry izahay. Samy nandeha bisikileta nandritra ny fotoana lava izahay roa. Nividy zavatra teny an-dalana ny raiko ary nody izy mba haka ahy any an-trano mandritra ny dia. Fotoana lavitr'ezaka izany ary afaka mafana be aho rehefa mitondra ny bisikiletany! ". Tsy maintsy nandeha bisikileta i Rojo mba hampiofanana, fitsangatsanganana manodidina ny 20 kilometatra miala ny tranony amin'ny fampiofanana. Nanao sorona maro izy mba hahatsapany ny nofiny ho mpilalao baolina matihanina.
"Hitako ny fitiavany" hoy Rojo Snr (rainy). "Hitako izany tao aminy ary afaka nahita ahy tao aminy aho satria handeha hanaraka ny baolina rehetra. Samy hafa tamin'ny tovolahy tamin'ny taonany izy. " Ny klioba (Estudiantes), tanora mpanazatra, Gabriel San Millan, dia nahafantatra ny tanjon'i Marcos ary nanampy tamin'ny fampivelarana ny talentany tao amin'ny kliobany matihanina. "Ara-teknika, mpilalao mahay izy," hoy i San Millan. Nitohy izy ..."Nanana fahaiza-manao tsara sy tsara fototra izy. Saingy ny zavatra izay nipoitra foana momba azy dia ny faniriana ny hanao tsaratsara kokoa hatrany. Tsy nampino ny fivoaran'i Marcos Alonso ho mpilalao. Rehefa izy no 18 na 19, dia nanomboka nivoatra ara-batana izy.
Tamin'ny faran'ny taonany, Marcos dia efa nilalao niaraka tamin'ny faritra teo an-toerana, Estudiantes, izay ao amin'ny Diviziona voalohany Arzantina. Voarohirohy tamin'ny ady ny zokin'i Marcos ary nialany ny fianarany tany am-boalohany. Betsaka ny fandrobana, ady ary fahafatesana mihitsy aza. Ny football dia mpamonjy azy. Nanao baolina hatrany hatrany izy hatramin'ny naha zazalahy kely azy. Lalao mandrakariva, andro sy alina. Maro, matetika i Marcos dia hiady. Tezitra be izy ary manana fifandirana be loatra. Izany no fitsipika arahin'ireny arabe ireny. Tokony ho matanjaka ianao.
Taorian'ny nahazoany ny Copa Libertadores tamin'ny faran'ny taonany, Marcos nifindra tany Spartak Moskoa ary avy eo, Sporting Lisbon. Nanao ny marika izy tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2014 tany Brezila satria nandalo ny làlana mankany Argentine i Arzantina alohan'ny handaozany an'i Alemana. Izany dia nitondra ho amin'ny antso avy amin'ny Man United. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Marcos Rojo Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Hafatra Tantara -Relationship Life
Rojo dia manambady amin'i Eugenia Lusardo, modely lavabe mipetraka any Lisbonne. Samy nifankahita ireo mpifankatia ireo ary nifankatia raha rojo tao Sporting CP. Eugenia ary niasa tao amin'ny orinasan-trondro Lemaire antsoina hoe Dama de Copas. Tena izy, vehivavy manana ny hatsaran-tarehy.
Ireo mpivady dia manana zanakavavy antsoina hoe Morena (izay antsoin'izy ireo hoe 'More').
Ny fiainan'i Rojo miaraka amin'ny modely mahafatifaty Eugenia Lusardo dia tontolo manerantany avy amin'ny hakingan-tsoan'i Arzantina ao anaty barrio mahantra.
The Affair: Tamin'ny volana desambra 2014 dia niady hevitra tamin'ny vehivavy iray nihaona tao amin'ny club club i Rojo. Nampangainy ho mainty izy ary namoaka didy hanakana ny gazety namoaka ny anarany tao anatin'ilay tantara. Nofoanana tamin'ny volana 2015 ilay didim-pitsarana tamin'ny anarany noho ny ahiahian'ireo mpilalao baolina hafa mety ho ahiahina amin'io raharaha io, saingy mbola mijanona eo amin'ny toerana hisorohana ny famotsorana ireo sarin'i Rojo.
Marcos Rojo Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Hafatra Tantara -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny football dia namonjy an'i Marcos avy amin'ny fiainana tao amin'ny araben'i El Triunfo ary nanala ny fianakaviany tsy ho tratry ny fahantrana. Ity ambany ity ny sarin'i Marcos sy ny Mum, Carlina izay mpandray tombony lehibe indrindra amin'ny hareny sy ny fahombiazany.
Marcos Rojo Snr, anaram-bosoka hoe 'Titi', mpilalao am-pirahalahiana teo aloha niaraka tamin'i El Cruce ary nanampy tamin'ny fanosehana ny zanany tao anatin'ny kilalao nandritra ny fahatanorany. Ny rainy dia nanao £ 2.50 isan'andro ho mpivarotra ravin-trano, izay tokony ampy hanome sakafo an'i Marcos sy ny efatra mianadany - Franco, ary rahavavy telo - Noelia, Micaela, ary Sol. Ity ambany ity ny sarin'i Marcos sy ny telo amin'ireo iray tampo aminy nandritra ny fahazazany.
Ny lazan'i Marcos Rojo sy ny harenany dia namela ny fianakaviany hody any an-trano noho ny tahotra ny hamono azy. Ireo mpamono olona any Arzantina dia efa nokapohina ny rainy ary nametraka basy ho an'ny reniny. Mpikambana iray ao amin'ny andian-jiolahy iray izay nipoitra tao an-tranony tany an-tanindrazany dia nandrahona hamono an'i Sol sy Godson rahavaviny sivy taona, antitra iray.
Nanantena izy ireo fa haninjitra ny tanany amin'ny sasantsasany amin'ireo livre tapitrisa izay matetika izy ireo no miverina amin'ny havan-tiany. Tonga izany rehefa nalaza tamin'ny alàlan'ny Old Trafford mpanadio ny volany. Ny rahalahin'i Marcos, Franco ary ny anabavin'i Noelia, dia niresaka tamim-pahasahiana momba ny tahotra ny fianakavian'izy ireo fa iharan-doza ny fahombiazan'i Marcos eny an-kianja
Tao anatin'ny tafatafa manokana niarahan'ny The Sun, dia nilaza izy ireo fa hatramin'ny nanombohany nanatevin-daharana an'i Man Utd tamin'ny volana Aogositra, tsy nitsahatra namaly ny varavaran'izy ireo ny fianakaviana ary niaro ny filaminana. Hoy i Noelia avy any an-tranony any La Plata: "Matahotra foana izahay. Manindry anay noho i Marcos. Fantatr'izy ireo ny trano, fantatry ny rehetra. Mila mandray fepetra rehetra isika ary isika
Aza mamaly ratsy ny varavarana. Tsy maintsy nametraka barres teo amin'ny varavarankely rehetra izahay - ny anoloana, ny lamosina ary ny varavarana ambony ambony. Olona mampidi-doza ny fianakavian'i Marcos Rojo. Fa tsy handeha izahay satria ity no tranonay. " Tena nalahelo azy noho ny fanafihan'ny jiolahimboto ny tranon-dreniny sy ny tranon-dry zareo fa nandefa sary tao amin'ny kaontiny Twitter izy izay mampiseho ny taorian'ilay fitsapana mahery setra. Mandritra izany, Marcos iray tezitra dia nitaky ny hitan'ny mpitandro filaminana ireo meloka - izy ireo
tsy nanao izany mihitsy - ary naka ny Twitter mba hanamelohana ireo mpanafika.
Na dia niala tamin'ny tranony aza ny fianakaviany dia mbola niharan'ny herisetra ihany izy ireo
tetikasa vaovao hanangonana vola avy amin'izy ireo. Tsara ny manamarika fa rehefa nikambana tamin'i United i Marcos tamin'ny fahavaratra, dia najanona ilay fifanarahana noho ny olana momba ny fahazoan-dàlana nateraky ny fiampangan'ny fanafihana tany an-tanindrazany.
Marcos Rojo Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Hafatra Tantara - Mitantana ny Loza
Hoy i Franco rahalahiny: ... "Te hahalala an'i Veron foana izy ary mody mihaino azy rehefa nilalao baolina tao an-trano. Matetika i Marcos dia mipetraka ao amin'ny efitrano iray mandritra ny andro maromaro raha toa ka resy tamin'ny ekipa manan-danja ny ekipany. Taorian'ny nidiran'i Arzantina tany Alemana tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2014, dia tsy niteny na nahita olona nandritra ny herinandro i Marcos. Mety ho tezitra mandritra ny andro maro izy. Mijanona ho tezitra izy. Amin'izao fotoana izao, tokony hilaozana irery izy ary avy eo dia ho tony izy. Taorian'ny fiadiana ny amboara eran-tany dia naharitra dimy andro izy. Namadika ny findainy izy ary tsy miresaka amin'olona. Saingy mbola tsy nitranga tao Manchester United izany. "
Marcos Rojo Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Hafatra Tantara - Ilay controversy
Niteraka adihevitra iray i Marcos taorian'ny namoahany ny sarin'i Rablo Escobar, tompon'ny zava-mahadomelina, ao amin'ny pejy Instagram miaraka aminy: "Ireo izay niara-dia tamiko ihany no nijoro teo anilako, raha nihinanako nandritra ny fotoana fohy teo amin'ny latabatra teo amin'ny latabatra."
Marcos, raha nifanatrika, dia nilaza fa tsy dia goavana ilay lahatsoratra ary nanampy hoe: "Nataoko ny sary satria tiako ny teny sy ny teny." Peharbs, he nahita ny tantara niainan'i Escobar tao amin'ny fahitalavitra ary tia ny andian-teny. Tsy midika izany. Raha ny marina dia manohana ny zavatra nataony izy. Na izany aza, na dia teo aza ny fahombiazany, Marcos dia tsy nanadino ny fakany ary nanome antoka fa nahazo tombony avy amin'ny fahombiazany ny fianakaviany rehetra.
Mety tsy nitranga izany raha toa ka nanaraka ny fitiavany hafa teo amin'ny fiainana izy 'Hira'. Naniry ny ho mpihira i Marcos raha toa ka tsy mpilalao baolina kitra izy. Raha ny marina, mihira sy mandihy izy amin'ny antoko rehetra, ny hetsika rehetra ao amin'ny fianakaviana.
Marcos Rojo Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Hafatra Tantara -Fiainana manokana
Marcos Rojo dia manana ny toetran'ny toetrany.
Ny tanjon'i Marcos Rojo: Izy dia fangorahana, artistic, intuitive, malefaka, hendry ary tena mozika (Talenta voalohany talohan'ny baolina kitra).
Ny Fahalemen'i Marcos Rojo: Tsy fahafahana mitantana ny fahavoazana.
Inona no tian'i Marcos Rojo: Ny maha-irery, ny torimaso, ny mozika, ny romantique, ny haino aman-jery sy ny mozika.
Inona no tsy tia an'i Marcos Rojo: Mediocres, voatsikera, ny taloha dia niverina haka azy sy ny halozàna rehetra.
Tsara fanahy i Marcos, ka matetika izy ireo no miara-miasa amin'ny olona samy hafa. Tsy tia tena koa izy ary vonona ny hanampy olon-kafa, ary tsy manantena ny hahazo zavatra hafa.
Marcos Rojo Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Hafatra Tantara -Banana mihinana
Marcos Rojo dia nanome ny iray amin'ireo teboka lehibe momba ny fifandraisan'i Manchester United ao amin'ny Ligy Eoropeana miaraka amin'i Rostov - amin'ny fihinanana banana eny amin'ny lampihazo!
Izy izay dia Jose Mourinho'ny sisiny izay nandroso tamin'ny fifanintsanana faha-efatra tamin'ny fifaninanana 2-1 amin'ny gasy Juan Mata ny fitokonana faharoa. Ireo mpankafy mpankafy dia mbola tsy nanan-tsiny raha i Ashley Young no nahita an'i Rojo nisintona baingo ho azy raha mihinana raha eo amin'ny sehatry ny milalao.
Jose Mourinho dia niaiky fa ny fahitana tsy mahazatra dia vokatry vokatry ny reraka, izay mety hiteraka fihenam-bahaolana eo amin'ny ankehitriny sy amin'ny faran'ny vanim-potoana.
Niteny i Mourinho BT Sport: "Reraka imbetsaka i Marcos. Fantany fa mila zavatra iray ny vatany. Nangataka fangarony fotsiny izy. Tsy mampihomehy mihitsy ny toe-draharaha, tsy maintsy manaja ny toe-batan'ny mpilalao isika. "
Marcos Rojo Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Hafatra Tantara -Tattoo
Efa mahay miteny Anglisy i Rojo, araka ny tatoazy amin'ny tongony, izay mamaky 'Pride' ary 'Voninahitra'.
Manana tatoazy hafa koa izy:
Marcos Rojo Tantara Momba ny Tantaram-pahagagana Tampoka Feno Hafatra Tantara -Rabona Clearance
saingy mitsara amin'io 'Rabona'Ny fisintonana amin'ny World Cup dia tsy manana fahatokiana be loatra amin'ny tongony havanana. Mark Lawrenson dia manolo-kevitra hoe "mety ho nijery ny boriky izy" raha toa ka diso hevitra izy.
FACT CHECK: Misaotra noho ny famakiana ny tantaram-pitiavan'Atoa Marcos Rojo momba ny tantaran'ny tantaram-piainana. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Arzantina Football Diary
Eric Cantona Childhood Tantara Plus Untold Biography Facts
Emi Buendia Tantaran'ny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Tantara Mason Greenwood Childhood plus Untold Biography Facts
Nitantara ny tantaram-pitiavan'i Lautaro Martinez momba ny tantaram-pahaterahana ny tantaram-pianakaviana
Ny tantaran'i Aaron Wan-Bissaka momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ole Gunnar Solskjear tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny tantaram-piraisan'i Juan Foyth momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa no hitantsika
Roberto Pereyra Tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Tantara Achraf Hakimi Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
vannyhenrico - Febroary 27, 2020
Febroary 23, 2020
TOROHEVITRA MAHAY MAHAY
vannyhenrico - Febroary 27, 2020 0
vannyhenrico - Febroary 23, 2020 1
Febroary 27, 2020
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Enga anie 20, 2017
Paul Pogba tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika bebe kokoa
Jona 21, 2016
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts
Enga anie 13, 2017
© Copyright 2016 - Theme noforonin'ny HagePlex Technologies
Ny tantaran'i Andy Cole Childhood Plus untold
Desambra 30, 2017
Mitantara momba ny tantaram-pitiavan'i Chris Smalling momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Janoary 17, 2018
Mauricio Pochettino tantaram-pitiavana momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Jolay 30, 2017
David De Gea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Oktobra 3, 2017
Diogo Dalot tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Jolay 3, 2018
Paulo Dybala Tantara Mitantara Momba Ny Tantaram-pitiavana
Enga anie 29, 2017